October 2018 - RastraKhabar-Nepal's Popular Digital Newspaper
ललितपुर, १३ कार्तिक – पाटन शंखमुलस्थित ईलेभेन स्टार क्लबको आयोजनामा १० औं यल कप ब्याडमिन्टन रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता –२०७५ सन्चालनमा आएको छ । प्रतियोगिता शनिबार देखि शंखमुल प्लानिङ्गमा सुरु भएको हो । प्रतियोगिताको उद्घाटन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशव कुमार बिष्टले गरेका थिए । प्रतियोगितामा पुरुष युगल, भेट्रानस युगल, मिक्स युगल र यु – १५ छात्र तर्फ प्रतिस्पर्धा भइेरहेको कुरा ईलेभेन स्टार क्लबका उपाध्यक्ष राजेश तण्डुकारले बताए । प्रतियोगितामा पुरुष युगलमा ५३ जोडी, भेट्रान्स जोडीमा ११, मिक्स जोडी तर्फ १६ र यु – १५ मा २८ जोडीले सहभागिता जनाएको तण्डुकारले जानकारी गराए । उपाध्यक्ष राजेश तण्डुकारले बताए अनुसार करिव १२ लाख ६० हजार अनुमानित बजेट रहेको प्रतियोगितामा पुरुष युगल तर्फका विजयी पहिलो, दोश्रो र तेश्रो हुने खेलाडीहरुले क्रमशः नगद ३०, २० र १० हजारका साथै मेडल, ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने छन् । यस्तै भेट्रान्स तर्फ १५, १० र ५ तथा मिक्स युगल र यु – १५ तर्फ १०, ७ र ४ हजार नगद सहित मेडल, ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने उनले बताएका छन् l
October 29, 2018 rastrakhabar 0
ग्ल्यामर्स फोटोग्राफर कुबेर तामाङ म्युजिक भिडियो मार्फत अभिनयमा आउने भएका छन् । गायक उर्गेन लामाको नयाँ गीत ‘फूलको माला उनेर’को भिडियो मार्फत तामाङले भिडियोमा डेब्यु गर्न लागेका हुन् । उक्त भिडियोमा कुबेरलार्इ मोडल ज्योति प्रसाइले साथ दिएकी छिन् ।
काभ्रेको सुन्दर गाउँ तेमालमा छायाँकन सम्पन्न भएको गीतको भिडियो चाडैनै स्रोता/दर्शकमाझ आउँने उर्गेनले बताए । ‘हामीले तयारी गरिरहेका छौ छिट्टै सार्वजनिक गर्छौ’ उर्गेनले भने ।
उर्गेनकै शब्द, सङ्गीत र स्वर रहेको गीतको भिडियोलाई उर्गेनलेनै निर्देशन गरेका छन् भने ह्यारी महर्जनले छायांकन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल भर्ना
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) मा भर्ना भएका छन् । केही दिनदेखि अस्वस्थ प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि सोमबार बिहान अस्पताल भर्ना भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा अहिले मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अरुण सायमी, निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह र छाती रोग विशेषज्ञ सन्त दासलगायतको टोली खटिएको छ ।
धानमन्त्री ओलीलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि अस्पताल ल्याइएको हो । उहाँको स्वास्थ्य अहिले सामान्य रहेको जानकारी उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले दिए ।
जाकार्ताबाट पङ्गकल पिनाङका लागि उडेको लायन एयरको बोइङ सम्पर्कविहीन
इन्डोनेसियाको जाकार्ताबाट उडेको लायन एयरको बोइङ सम्पर्कविहीन भएको छ । एकदमै नयाँ बोइङ ७३७ म्याक्स ८ जहाज जाकार्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको केही मिनेटपछि नै राडारको सम्पर्कबाट विच्छेद भएको थियो ।
फ्लाइट नम्बर जेटी-६१० जहाज जाकार्ताबाट पङ्गकल पिनाङका लागि उडेको थियो । तर उडेको केही मिनेटमै जहाज सम्पर्कविहीन भएको थियो । समुद्र पार गरिरहेको बेला पश्चिम जाभा प्रान्तको कारावाङबाट जहाज सम्पर्कविहीन भएको राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार केन्द्रका प्रवक्ता युसुफ लतिफले बताएका छन् । अहिले खोजी तथा उद्धार कार्य जारी छ । जहाजमा कति यात्रु थिए भन्ने खुलिसकेको छैन तर उक्त जहाजको क्षमता २१० यात्रुको थियो ।
बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ११ जनाको मृत्यु
October 28, 2018 rastrakhabar 0
अमेरिकाको पेन्सिलभिनियामा एक बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ११ जनाको ज्यान गएको छ । हरीले बन्दुकधारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । तर, उनको परिचय भने खुलाइएको छैन ।
अन्धाधुन्द गोली चलाएपछि उक्त व्यक्तिले आत्मसमर्पण गरेको बीबीसीले जनाएको छ । घटना स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान १० बजे भएको प्रहरीले जनाएको छ । यहुदीहरुको प्रार्थना चलिरहेको बेला गोली चलेको बताइएको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले ती बन्धुकधारी ४६ वर्षीय रोबर्ट बोबर्स रहेको बताएका छन् ।
पायल्सले सताउछ ? उपचार सजिलै गर्न सकिन्छ
चाडपर्वमा मिठोमसिनो, चिप्लो -चाप्लो, अमिलो -पिरो खाइयो , अब तिहार आउँदैछ, मिठाई खानैपर्‍यो । तिहार भन्नसाथ सेलरोटी छुटाउने कुरा भएन । तर, चाडपर्वमा मिठो (मसिनो खान पनि डराउनुपर्ने ) नभए त पायल्सले सताइहाल्छ ।
हो त, अहिले धेरैको साझा पिडा बनेको छ, पायल्स । यो अस्वस्थ्यकर खाना र निस्क्रिय जीवनशैलीका कारण पायल्सको पीडा झेल्नुपरेको छ । जंकफूड, मिठाई, मदिरा, मसलेदार खाना आदि पायल्सको कारण बनेको छ । पायल्स यस्तो समस्या हो, जसले हाम्रो दिनचर्या नै प्रभावित बनाउँछ ।
पाइल्स भएमा मल त्याग गर्दा असहय पिडा हुने, मलद्वारबाट रगत बग्ने, मलद्वारा वरिपरि गाठो वा मासुको डल्लो महसुस हुने, चिलाउनु, रातो हुने तथा पोल्ने लगायतका लक्षण देखिने गर्दछ ।
ठूलो आन्द्राको अन्तिम भागमा मलद्वार हुन्छ । लगभग चार सेमी इञ्ज लामो मलद्वार सुन्निएमा पाइल्स हुने गर्छ । पायल्स भएमा मलद्वारको आन्तरिक (भित्री) भाग तथा बाह्य भागमा मासुको डल्लो जस्तो गाँठो पर्ने गर्छ । जहाँबाट बेलाबेलामा रगत निस्कने गर्दछ । दिसा बस्दा थप दवाव सिर्जना भएमा त्यहाँबाट मासुको डल्लो समेत निस्कने गर्छ । यस्तो अवस्थामा असहय पिडा हुन्छ ।
पायल्स दुई प्रकारको हुन्छ, आन्तरिक र बाह्य ।
आन्तरिक पायल्स मलद्वारको भित्री पट्टी दुई(तीन सेन्टिमिटर माथि हुन्छ । आन्तरिक पायल्स पिडारहित हुन्छ ।
जबकी बाहिरी पाइल्स मलद्धाराको बाहिरी भागको दुई(तीन सेन्टीमिटर तल हुन्छ । मलद्धारको भाहिरी टिस्यूमा मासुको ससाना डल्लो हुने भएकोल भएकोले यो बढी पिडादायक हुन्छ ।
तथापी, आन्तरिक पायल्सलाई यसको जटिलता एवं आकारका अनुसार चार ग्रेडमा वर्गीकृत गरिएको छ ।
यो पायल्सको सुरुवाती स्टेज भएकोले यसलाई सुरुवाती चरण भनिन्छ, जसमा कुनै प्रकारको लक्षण देखिदैन र पिडा पनि हुँदैन । परिणामस्वरुप, यो स्टेजमा विरामीलाई आफूलाई पायल्स भएको छ भन्ने सम्म पनि ज्ञान हुँदैन ।
बरु मलद्वार भित्रको टिस्यू हल्का सुन्निने भएकोले विरामीलाई छाला खस्रेको जस्ता महसुस हुनसक्दछ । र, दिसा बस्दा जोड लगाएको खण्डमा थोरै रगत निस्कने गर्दछ । तथापी, यो पायल्स शरीर भित्रै हुने गर्दछ ।
यस चरणमा मलद्वारा पहिले भन्दा बढी सुन्निनुका साथै मल त्याग गर्दा रगतको साथमा मासुको डल्ला बाहिरतिर निस्कन थाल्दछ । र, हातले भित्र पसाएको खण्डमा उक्त मासु फेरी भित्र पस्ने गर्छ । यसमा मासु बाहिर निस्कने हुँदा यो पहिलो चरणमा थोरै पिडादायी हुनसक्छ ।
यस चरणमा मासुको साथमा रगत पनि निस्कने भएकोले यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिइने गरिन्छ । यस चरणमा मासु बाहिर नै रहने गर्दछ । र निकै प्रयास गरेपछि मात्र उक्त मासु भित्र छिर्ने भएकोले यो दुई चरण भन्दा बढी पीडादायक हुने गर्छ ।
जब तेश्रो चरण खराब हुन्छ, तब चौथो चरणमा पुग्दछ । यो चरणमा अवस्था जटिल बन्दछ । जसका कारण मल त्यागको समयमा असहय पीडा हुने गर्छ । र मल त्यागको समयमा रगतसँगै मासु पनि बाहिर निस्कने गर्छ । बाहिरै झुण्डिएर बस्छ । र, यस चरणमा संक्रमणको खतरा पनि बढी हुन्छ ।
प्रायजसो कब्जियतका कारण पायल्स हुने गर्छ । कब्जियत भएमा मल त्याग गर्दा दवाव उत्पन्न हुन्छ । जसले गर्दा मलद्वार वरिपरिको नशा फुटेर तथा त्यहाँबाट रक्तश्राव भएर नशा सुन्निने गर्छ । र, पायल्स हुने गर्छ ।
त्यसबाहेक, गर्भावस्था, मोटापना , गलत खानपान, खानपानमा पोषक तत्वको कमी, कडा व्यायाम, लामो समय एकै ठाउमा बसेर काम गने बानी, शरीरमा तरल पदार्थको कमी, डायरिया, औषधीको अनावश्यक प्रयोग, आणुवंसिक कारण लगायतले पनि पायल्स हुने गर्छ ।
पायल्स हुँदैमा आत्तिहाल्नु पर्दैन । शल्यक्रिया तथा घरेलु औषधीको प्रयोग तथा लेजर उपचारद्वारा पनि पायल्स निको पार्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, अव्यवस्थित जीवनशैली गलत खानपानका कारण पनि पायल्स हुने भएकोले जीवनशैलीलाई व्यवस्थित बनाएर तथा सन्तुलित आहारको सेवन गरेर पनि पाइल्सलाई निको पार्न सकिन्छ ।
विशेषगरी फाइबरयुक्त खानेकुराका साथमा हरियो सागसब्जी, ड्राई फ्रुट्स, आइरन युक्त खाद्य पदार्थ तथा पानीको सेवन गरेर पनि पायल्सको समस्यालाई न्युन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, मैदा, जंकफुड, धुमपान, मदिरा, दूधजन्य पदार्थ, मासुको, तेल, मसलेदार खाद्य पदार्थबाट बचेर पनि पायल्सबाट बच्न सकिन्छ ।
देशको प्रतिनिधित्व गर्दै सपनाले फिलिपिन्समा हुने टप अफ द वल्र्ड प्लस साईजमा सहभागिता जनाउने
October 26, 2018 rastrakhabar 0
नेपालको पहिलो ओमनिया सुपर प्लस साईज मोडल नेपाल–२०१८ की बिजेता सपना राई नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै फिलिपिन्समा हुन लागेको टप अफ द वल्र्ड प्लस साईजमा भाग लिने भएकी छिन । नेपालको कलासंस्कृति, भेषभुषा रितिरिवाज लगायत देशकै पहिचान बोकेका सम्पदाहरुलाई उक्त प्रतियोगीताको माध्यमबाट बिश्व माझ परिचित गराउन आगामी नोभेम्वर ६ तारिखका दिन फिलिपिन्स जादैछिन्। नोवेम्बर १० मा फिलिपिन्सको सैवुमा हुन गइरहेको टप अफ द वल्र्ड प्लस साईजको फाइनल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन सपना राई त्यस तर्फ जान लागेकी हुन । प्रतियोगिता कडा प्रतिस्पर्धा र निकै चुनौतीपूर्ण हुने भएकोले आफुले निकै मिहिनेत गरेको सपना बताउछिन । साथै यस महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने आयोजक डेविल सिंह प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण नेपालीहरुको माया तथा आर्शिवादले आफुले प्रतियोगिता जित्नेमा ढुक्क भएको बताईन ।
बिश्वका ३५ राष्ट्रबाट प्रतियोगीहरुले भाग लिएका छन् । नेपालबाटै पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशकै प्रतिनिधित्व गर्दै प्लस साईज मोडलले यसरी सहभागीता जनाउन पाउनु गर्वको विषय भएको मोडल सङ्गस नेपालका अध्यक्ष एवं सुपर प्लस साईज नेपालका आयोजक डेविल सिहं राजपुतले जानकारी दिए । नेपालमा दर्जनौं सफल सौन्दर्य प्रतियोगिता , अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड तथा विभिन्न फेशन शोहरु आयोजना गरेर चर्चा कमाएको मोडल सङ्गस नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि भाग लिन पाउने अवसर जुटाएको छ । प्रतियोगिताका लागी पेज थ्रि हट क्यूटरले ड्रेस डिजाईन गर्ने भएको छ । पेज थ्रिले डिजाइन गरेका विभिन्न पहिरनमा सपनाले आफ्नो देशको संस्कृती झल्काउने पोशाक र कुमारी नृत्यमा आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने जानकारी राजपुतले दिए ।
बलात्कार आरोपमा सिरहाबाट ४ जना पक्राउ
October 22, 2018 rastrakhabar 0
बलात्कार आरोपमा सिरहाको बरियापट्टीबाट ४ जना पक्राउ परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय वरियापट्टी सिरहाले १६ वर्षीया किशोरी बलात्कार आरोपमा आइतबार राति उनीहरुलाई पक्रेको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय, वरियापट्टीले १६ वर्षीया किशोरी वरियापट्टीमा बलात्कृत भएको उजुरीपछि ४ जना समातिएको जानकारी दिएको छ । होटलमा काम गर्दै आइरहेकी किशोरीमाथि आइतबार राति १० बजे बलात्कार भएको बताइएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा काशीनाथ सिंह, मुकेश सहनी, उगन सहनी र विजयकुमार यादव छन् । चारै जना भारत बिहारका हुन् । उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहामा लगेर थप अनुसन्धान भइरहेको वरियापट्टी इलाका प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।